အသက် ၂၁ ရက် ၇၉ ရက်ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ပထမဆုံးလိင်မှုကိစ္စ (HOCD) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
နောက်ခံသမိုင်း, အသက် 20 ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါငါဟာအဲဒါကိုငါ့အပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။ ငါ3ကွဲပြားခြားနားသောမိန်းကလေးများနှင့်အတူ3ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံမှုပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ စောင့်ပါ .. 4! ဟားဟား။ သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သကဲ့သို့၊ အကြီးအကျယ် အဲဒီလေးယောက်ထဲက ၃ ယောက်အတွက်ငါအရက်မူးနေတယ်၊ (ဘယ်လိုငါဒီလောက်မျက်စိကန်းနေတာလဲ။ ) ဒါပေမယ့်အခုငါပိုသိလာပြီ။ မှတ်တမ်းအတွက်အသက် ၁၃ နှစ်ဝန်းကျင်မှာစပြီးကြည့်ခဲ့တယ်။ ဒါဆို ၇ နှစ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတစ်ပါတ်အတိတ်မရနိုင်ဘူး။ ငရဲ, စုံတွဲတစ်တွဲရက်ပေါင်းပင်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ စာရွက်ချပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ထိုသူတို့မလွှဲမရှောင်ဖြစ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါ ၂ ရသွားတယ်။ နောက်တစ်ခါပြန်ချော့ပြီးတဲ့နောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသထွက်လာပြီး Laptop ကိုမရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါကိုငါ့အဖေအိမ်မှာထားခဲ့တယ် အဲဒါပြီးပြီ။ ငါတစ်လတယ်ပြီးတာနဲ့ငါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။
ပြန်ဖွင့်မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုထို့နောက်နီးပါး 8 ရက်သတ္တပတ် သွား. , ငါပြန်ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီနောက်နှစ်လကြာအောင်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘူး သီတင်းနှစ်ပတ်။ တဖန်ငါမသွားရဖို့ခဏအော့ဖ်လိုင်းနေဖို့ခဲ့ရသည်။
နေ့ 44 ငါဒီနေ့ကို ၄၄ ရက်အထိလုပ်ပြီးပြီ။ ငါမရပ်ချင်ဘူး။ ငါရူးသွပ်ကဲ့သို့အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်မှတဆင့်ခဲ့ပါတယ်။ နေဆဲ flatlining ။ ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအဆိုးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ libido မရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ HOCD အတွက်တိုက်ရိုက်အစပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုပြန်လည်ရယူသောအခါ၎င်းသည်အလွန်အင်အားကြီးသောစူပါပါဝါကဲ့သို့တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာငါမ libido ကလွဲပြီးငါဟာ 'ယေဘုယျအားဖြင့်' ကောင်း 'အဖြစ်အများဆုံးခံစားရတယ်
အရင်တုန်းကဒီအရာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါငါတီဗွီ / အင်တာနက်ပေါ်ကမိန်းကလေးတွေကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတကယ်စစ်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တုန်းပဲ။ ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုစစ်ဆေးရန်အခြားသောနည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ ၆ ပတ်အတွင်းငါတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားခဲ့တယ်။ ငါထင်တဲ့သော့တစျခုကယ့်ကိုအစဉ်အဆက်စစ်ဆေးမပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့ပြုသကဲ့သို့အမှုအရာဖြစ်ပျက်ကြကုန်အံ့။
နေ့ 46 ငါနေဆဲတော်တော်လေးကောင်းသောခံစားရတယ် လွန်ခဲ့သောစုံတွဲနှစ်ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်သည်အမှန်တည်ငြိမ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးစိတ်ကျဝေဒနာသည်လွန်ခဲ့သောအချိန်ကဖြစ်သည်။ သော်လည်းငါ့ libido အပေါ်စောင့်ဆိုင်း။ ဒါဟာနေ့အားဖြင့်ပိုပြီးစိတ်ပျက်စရာရရှိသွားတဲ့။ ငါ့ကိုမရှိလို့ဝမ်းနည်းခြင်းကမရှိခြင်းပဲ။ လွန်ခဲ့သောရက် ၄၀ အတွင်း၌ကျွန်ုပ်သည်တကယ့်ကိုခိုင်မာသောနံနက်သစ်သားဖြင့်နှိုးထခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်မော်ကွန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပါပဲ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသုညနံနက်သစ်သား။ ဤရှေ့နောက်မညီမှုသည်မျှော်လင့်ထားသော်လည်းညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းပင်!
နေ့ 49 ဒီနေ့ငါကိုယ်တိုင်စိတ်ပျက်နေတယ်။ ဒီတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကငါအိမ်အပြင်ထွက်မလာသေးဘူး။ အဲဒါတကယ်မိုက်မဲတာပဲ ဤအရာများသည်ငါ့အတွက်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုပိုကောင်းအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိပါတယ်။ လူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိပေမယ့်ကျွန်တော်ဟာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဝင်နေပြီးအစားထဲမှာပဲနေခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလုံခြုံတယ်။ ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ဤအလားအလာအသစ်များအားလုံးရှိနေသည်ဟုခံစားမိသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကလျစ်လျူရှုခံနေတာပဲ။
နေ့ 56 ဒါကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့သမျှအရှည်ဆုံးပါ။ ရပ်နားရန်မစီစဉ်ပါ။ ကျွန်တော်နေလို့ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်သည်စိတ်ဓာတ်ကျသည့်အခြေအနေသို့ရောက်ခဲသည်၊ ကျွန်ုပ်လုပ်ပါကခဏတာမျှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ libido ကျိန်းသေပြန်လာနေသည် ငါကကန်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ၁၀၀% ဟုတ်တယ်လို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကအမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူနေဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကိုတကယ်ဘဝမှာတွေ့မြင်ရတာကငါ့ကိုလှည့်စားနေတယ်။ ပြီးတော့ငါဖွင့်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ငါခက်လာပြီလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ငါ့ပေါင်ခြံထဲမှာခံစားချက်တစ်ခုရတယ်။ ခံစားချက်ကောင်းတစ်ခု ငါဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်ဖို့ကြိုးစားရတော့မယ်လို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတော့မမှန်ပါဘူး
နေ့ 64 Bleh ။ ဒါကငါ့ဘဝမှာငါ့ရဲ့လူမှုဘဝဟာမရှိသလောက်နီးပါးဖြစ်လာတယ်။ ငါပဲဒီအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းမှထွက်ခြင်း အနိမ့်အပြန်အလှန်အလုပ်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်။ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ငါနဲ့အတူသူတို့နဲ့ဆုံတွေ့ခွင့်ရတယ်၊ ငါကသူတို့ရဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအခါအားလျော်စွာတွေ့ရမယ်၊ ဒါပေမယ့်အခု ၂ လမှာအိမ်ထောင်ဖက်လောင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တစ်ကြိမ်တော့မရှိခဲ့ဘူး။ ငါမတိုင်မီစုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကလိင်ဆက်ဆံဖို့နီးပါးတိုးလာပေမယ့်ကွန်ဒုံးကိုထုတ်လိုက်တော့ငါစိုက်ထူတာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ (ဒီတစ်ခါလည်းအရက်မူးပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာ) ။
နေ့ 67 ငါပြားနေတုန်းပဲ ဤနေရာတွင်ရှိ Sparks ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာဘာမျှ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပို၍ အကောင်းမြင်လာသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ရက်ပေါင်း ၂၀၀ ကြာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ငါအဲဒီမှာရှိကိုသိနှင့်အချိန်ပဲကိစ္စပါပဲ။
နေ့ 68 ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာသည့်အိပ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမလိင်ရုံထွက်အောင်နှင့်တက် feeling ။ ဒါပေမယ့်ငါအိပ်မက်ထဲမှာငါစိုက်ထူရဘယ်လောက်အလွယ်တကူမှတ်မိသေးတယ်။ တော်တော်အေးသွားတယ် ငါဒီလိုအချိန်အတော်များများမှာအိပ်မက်မက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ။
Reboot logs အချို့မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစိုက်ကြည့်ရုံနဲ့မလုံလောက်တာကိုငါမှတ်မိသေးတယ်။ ဒါကကောင်းနေလိမ့်မယ်။ ဒါနဲ့ငါတစ်ချိန်ချိန်မှာရှိလိမ့်မယ်။ ငါအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုတာကဆုံးဖြတ်ချက်မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဒီမှာတခြားသူတွေနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလိုပဲ၊ ငါဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမှုနဲ့ရငျးနှီးမှုနှငျ့အကြှနျုပျကိုအသှငျပွောငျးလဲရနျလိုအပျပါလိမျ့မယျ။
79 ရက်ပေါင်းပြီးနောက်, ငါနောက်ဆုံးတော့လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရမ်းမိုက်တယ်။ အားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေ။ ငါ၏အရက်စွဲနောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေအရမ်းရယ်ရတယ် [အင်္ဂါနေ့နံနက်] ရုံနာရီအနည်းငယ်အကြာသည်အထိသွားတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမိန်းကလေးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ငါသည်နံနက်အချိန်၌ပိုပြီးအဘို့အဆင်သင့်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်မပိုကွန်ဒုံးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၆၉ တွင်နှစ်ကြိမ်ချောင်းကြည့်ပြီး pmo'd လုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်က။ ဒါဟာအနိုင်နိုင်ပင်ငါ့ကို phased ။ ဒါကြောင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သင်၏ 'relapses' ယူပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ နောက်ဆုံးပြန်လည်ပြန်ဖြစ်လာတာကငါဟာတကယ့်အရာကိုဆက်သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်။ အဘယ်သူမျှမငါ porn မှ jack ကိုသွားကြဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါသာပြသသည်မှာပြန်လည်ကျင့်မှုများသည်ကမ္ဘာအဆုံးမဟုတ်ကြောင်း (အနည်းဆုံးသူတို့သည်သင် reboot လုပ်ပြီးပါက) ဖြစ်သည်။
နေ့ 105 ငါ chime ထဲဝင်ချင်နေပြီ၊ ယခုငါအထက်တန်းကျောင်းကတည်းကပထမ ဦး ဆုံးစစ်မှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပါ။ (ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံသူဖြစ်သည်။ ) ဒါကတော်တော်ကြယ်တာရာပါ။
အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တကယ်မကြာသေးမီကပြောင်းလဲပါပြီ။ ငါအရမ်းစိုးရိမ်တာကတော့ porn ပဲ။ ငါ porn အကြောင်းမစတင်မီ, ကမိန်းကလေးများစိုးရိမ်ခဲ့သည်။ အခုအာရုံစိုက်ဖို့အများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။ ငါအောင်မြင်ချင်တယ်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်။ အခုငါ့မှာရည်းစားရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ကြီးထွားမှုကိုလူတစ်ယောက်လိုမြင်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးမှာတော့မလုံခြုံတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုပါ။ ဒီအချိန်ဟာလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ ငါသည်ငါ့ဝိသေသလက္ခဏာအတွက်အလွန်အစိုင်အခဲခံစားရတယ်။ အခုတော့ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အခါအရမ်းခက်တယ်။ ငါအရမ်းရယ်ရတယ်ငါတွေ့တဲ့ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းကိုရိုက်ချင်တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့ရည်းစားနဲ့နီးကပ်လာ, ဒါကြောင့်ငါငါ့လျှာကိုကိုက်။ ငါအမြဲတမ်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ED တစ်ခုလုံးကစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်မကောင်းဘူး။ အခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအသစ်ရှိလာပြီ။ ဒါကအရမ်းကိုစွမ်းအားတွေတိုးလာတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရငါဟာအမြဲတမ်းလိင်ကိုမလိုချင်ဘူး။ ဒီဟာငါလုပ်နေတာပဲ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်တစ်ပတ်လျှင် ၂ ကြိမ်သို့မဟုတ် ၃ ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံသည်။ ငါသူမကိုတွေ့တိုင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးနေသည်။ ညစ်ညမ်းမှုအားလုံးကသူမကို ၂၄/၇ သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
မင်းအားလုံးအားသန်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် !! ငါ့အတွက်အပြောင်းအလဲဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာမပြောတတ်ဘူး။ ဒီနဲ့ကပ်ပါ။
LINK - ဘလော့ဂ်မှကောက်နုတ်ချက်များ